Maanta oo kale hal sano ka hor maxaa ku dhacay Kooxda Barcelona?… + SAWIRRO – Gool FM
Maanta oo kale hal sano ka hor maxaa ku dhacay Kooxda Barcelona?… + SAWIRRO
Haaruun May 7, 2020
(Yurub) 07 Maajo 2020. Hal sano ka hor maanta oo kale kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa mucjiso kula soo kulantay garoonka Anfield.
07 bishii May sanadkii hore ee 2019 ayay ahayd Markii Liverpool ay ka soo laabatay saddex gool oo looga soo adkaaday lugta hore ee afar dhammaadka Champions league, isla markaana ay Barcelona ku garaacday 4-0 kulankii ka dhacay maanta oo kale sanadkii hore garoonka Anfield.
Kulankii lugta hore ee semi-final-ka Champions League ee kooxda reer Spain ee Barca iyo tan reer England ee Liverpool ku dhexmay garoonka Camp Nou ayaa Reds looga soo adkaaday 3-0, waxaana saddex gool kooxda reer Catalonia u kala dhaliyey Suarez iyo labo gool oo uu raacsaday Lionel Messi.
Ma jirin cid filanaysay in Liverpool ay ka soo kaban kartay goolashaas, maadaama aysan kulankaas diyaar ahayn Salah iyo Firmino, laakiin kulankii maanta oo kale sanadkii hore Reds ayaa dunida ka yaabsatay markii saddexdii gool ee lagu lahaa afar gool ku bedeshay, isla markaana iska xaadirisay final-ka Champions League oo markii dambe ay ku guuleysteen.
Afarta gool ee kulankan ay soo laabashada ku sameysay Reds waxaa kala qeybsaday oo kooxda Barcelona kala dhantaalay labada xiddig ee Origi iyo Wijnaldum.
Ugu dambeyntiina Kooxda Liverpool ayaa gacanta ku dhigtay koobka Champions League kaddib markii ay 2-0 ay uga adkaatay naadiga ay isku waddanka ka dhisan yihiin Tottenham Hotspur.
Xiddigaha ugu xawaaraha badan horyaalka Bundesliga oo la shaaciyey… (Hakimi oo hoggaaminaya & Alphonso Davies oo 11 ka soo muuqday!)
Juventus oo u dhaqaaqeysa soo xero-gelinta laacib khadka dhexe uga ciyaara Kooxda Chelsea